केटाको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न युवती बनाउँछ यी पाँच बहाना, तपाइँ पनि पर्नु भएको छ की! | Rajmarga
केटाको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न युवती बनाउँछ यी पाँच बहाना, तपाइँ पनि पर्नु भएको छ की!
एजेन्सी। कुनै युवती आफ्नो मनमिल्ने साथीसँगको सम्बन्ध नटुटाइ साथीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्छिन वा तपाइँसँगको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन चाहनन् भने कस्तो कस्तो वहाना खोज्छिन्? आज हामी तपाइँलाई यस्तै गज्जबको बहानाका विषयमा जानकारी दिँदैछौं।
तिमी मेरा भाइजस्तै हौ
प्रेम प्रस्तावको पर्खाइमा रहेका युवकलाई यस्तो वहाना सुन्ने वित्तिकै रक्षाबन्धनको सम्झना आउँछ। युवतीहरुको सबैभन्दा पहिलो वहाना हुन्छ, ‘तिमी मेरोे भाइ जस्तै हौ। मैले तिमीलाई कहिल्यै त्यस्तो नजरले हेरिन्। म तिमीलाई भाइ मान्थेँ। अनि तिमी चाँही … छी छी। यो वहाना सुन्ने वित्तिकै युवक आफैंदेखि लझाउन थाल्छ। र युवतीप्रति फिदा भएको मन पुरानै अवस्थामा फर्काउन केही समय लाग्छ।
मेरो ब्याइफ्रेण्ड छ
केटाहरुबाट पिछा छुटाउन सामान्यतया युवतीहरु भन्ने गर्छन्, ‘मेरो त सुरुदेखि नै ब्वाइफ्रेण्ड छ।’ युवतीको यो वहाना सुन्ने वित्तिकै केटाहरु पछि हट्छन्।
सबै युवक उस्तै हुन्छन्
यस्ती युवती जसले प्रेममा यसअघि नै धोका पाएका हुन्, यस्ता युवतीले केटाहरुप्रति आफ्नो मनमा नराम्रो धारणा बनाएका हुन्छन्। यस्तोमा अन्य कुनै युवक उसको नजिक हुने कोशिश गर्छ भने ती युवकलाई युवतीको जवाफ हुन्छ
बुवा आमालाई धोका
युवतीले सबैभन्दा छिटो वहाना बनाउने भनेको म आफ्ना बुवा आमालाई धोका दिन सक्दिन भन्ने हो। कुनै युवकले युवतीलाई प्रेम प्रस्ताव राख्यो भने युवतीको जवाफ हुने गर्छ, ‘म आफ्ना बुवा आमालाई धोका दिन सक्दिन।’
प्रेमको चक्करमा परेपछि करियर चौपट हुन्छ। यो अटुट सत्यको ज्ञान युवतीलाई युवकले प्रेम प्रस्ताव राख्ने वित्तिकै पाइने जवाफ हो। प्रेम प्रस्ताव राख्ने युवकलाई यसको ज्ञान त्यतिबेला हुन्छ जतिबेलासम्म ट्यूशन फी भन्दा कयौं गुना धेरै खर्च ग्रिटिङ कार्ड किन्नेमा भइसकेको हुन्छ।
म अरु जस्ती केटी होइन
यदि कुनै युवक पछि पर्यो भने युवतीको जवाफ हुन्छ म अरु कटी जस्ती होइन।
Previous post: दूध र दहीमा दिसामा पाइने जीवाणु फेला परेपछि
Next post: ट्रक त्रिशूलीमा खस्दा दुई बेपत्ता